Manchester City Oo La Soo Wareegaysa Goolhaye Stefan Ortega Xagaagaan.
HomeSuuqa kala iibsigaManchester City oo la soo wareegaysa Goolhaye Stefan Ortega Xagaagaan.
Manchester City ayaa lagu soo waramayaa inay heshiis afka ah la gaartay gool haye Stefan Ortega oo ah wakiil xor ah, hadii Zack Steffen uu ka tago kooxda xagaagan.
Ortega, oo 29 jir ah, ayaa qarka u saaran inuu ka tago kooxda reer Jarmal ee Arminia Bielefeld – oo ka laabatay Bundesliga – marka uu qandaraaskiisu dhaco dhammaadka bishaan.
Sida laga soo xigtay Kicker , Ortega ayaa qarka u saaran inuu u dhaqaaqo Man City, waxaana uu noqon doonaa goolhayaha labaad ee kooxda Ederson , iyadoo weriyaha Jarmalka Dirk Schlarmann uu intaa ku daray in heshiiska la soo gabagabeyn karo dhamaadka usbuucan.
Si kastaba ha ahaatee, khabiirka suuqa kala iibsiga ee Fabrizio Romano ayaa sheeganaya in heshiisku ku xirnaan doono haddii lambarka labaad ee City Zack Steffen uu uga tago Etihad Stadium mid ku meel gaar ah ama heshiis joogto ah.
Steffen, oo 27 jir ah, ayaa u saftay kaliya 21 kulan kooxda heysata horyaalka Premier League tan iyo markii uu ka yimid Columbus Crew 2019, iyo in kasta oo uu aqbalayo booskiisa haatan ee Ederson, waa la arki doonaa haddii xiddiga heerka caalami ee dalka Mareykanka uu u furan yahay inuu u dhaqaaqo meel kale si joogto ah. kooxda koowaad ee kubada cagta.